अर्थ - Pahilo News
दुगड र गोल्छा कालोसूचीमा
जेठ २२ । नगर क्षेत्रमा रहेर घर, जग्गा कारोवार र व्यवसाय कर नतिर्ने ठूला करदातालाई कालोसूचीमा राखेर विराटनगर उपमहानगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ । राजस्व नतिर्ने विराटनगरका एक दर्जन ठूला करदाताको घर, जग्गा रोक्का गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालयले आवश्यक पत्रचारसमेत गरिसकेको छ । दश वर्षदेखि कर नतिर्ने करदातालाई यस्तो कारव..
राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण आन्दोलन दवाव समितिले सरकारलाई दियो चेतावनी
जेठ २२ । राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण आन्दोलन दवाव समितिले प्रस्तावित सहकारी ऐनको ..
पुनर्निर्माणका लागि सामूहिक रुपमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणका लागि सबै दलले सामुहिक रु..
अपर मादीबाट मङ्सिर महिनासम्ममा विद्युत् उत्पाद हुने
काठमाडौँः पच्चिस मेगावाट क्षमताको कास्की जिल्लाको सिल्दुजुरे गाविसमा निर्माणाधीन..
काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित..
पुँजी वृद्धिले रन्थनिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू
काठमाडौं । वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुँजी वृद्धि गर्ने आधार खोज्दैछन् । पुँजी वृद्धिको आधार फेला पार्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने मर्जरका लागि सम्भावित बाटाहरू पहिल्याउँदै छन् । राष्..
आइक्यानमा यसरी भयो भ्रष्टाचार
काठमाडौं । नेपाली लेखा व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आइक्यान) मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम भएको पाइएको छ । विद्यार्थीलाई दिइने सूचना प्रविधिको तालिमसम्बन्धी कामलाई लिएर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम भएको सरोकारवालाको आरोप छ । प्रक्रिया र नियमविपरीत काम तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था छनोट भएपछि ..
१० महिनापछि सिटिसी मल सञ्चालनमा
काठमाडौं । भूकम्प गएको १० महिनापछि सिभिल ग्रुप अफ कम्पनीले राजधानीको व्यस्त स्थान बागदरबारमा निर्माण गरेको सिटिसी मल सञ्चालनमा आएको छ । भवन विभागको प्राविधिक टोलीलाई समेत निरीक्षण तथा उनीहरूको सुझावपछि सामान्य मर्मत सम्भारपछि मल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । भूकम्पलगत्तै सिभिल मलमा धेरै नै क्षति भएको भन्ने सञ्चार माध्यमका रिपोर्टिङले ..
लागू औषध कारोबारः सक्रियता नेपालीकै
काठमाडौं । महँगो लागू औषध एम्फेटामाइनका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी नेपाली भएको रहस्य खुलेपछि यसले ठूलै तरंग ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘हाई प्रोफाइल’का व्यक्तिले प्रयोग गर्ने एम्फेटामाइनको ओसारपसारका मुख्य अभियुक्त धर्म पाख्रिन रहेको बताइन्छ । हाल उनी थाइल्यान्डमा बस्दै आएका छन् र उतैबाट गिरोहमार्फत एम्फेटामाइनलाई अन्तर्रा..
ठेक्का नपाएपछि संसदीय समितिलाई गुहार
काठमाडौं । हुन त संसद्का विभिन्न समितिहरूका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र तोकिएका छन् । ती कार्यक्षेत्र नाघेर समितिहरूले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तर, संसद्को एउटा समिति भने आफ्नो कार्यक्षेत्रविपरीत उत्रिएको छ । संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले ठेक्का प्रकरणमा समेत हात हालेको छ । कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थाबार..
केन्द्रीय कफी सहकारीको अध्यक्षमा पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेमाथि यार्सागुम्बाको अवैध कारोबार गरेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । उनले तीन वर्षअघि यार्सागुम्बाको कारोबार गर्दै आएको एउटा ठूलै गिरोहसँग २० करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको रहस्य खुलेको थियो । अर्थमन्त्री पाण्डेले सभासद् ल्हारक्याल लामाको रोहबरमा जितमान पुन नाम गरेका व्यक्तिको समूहसँग यार्सागुम्बा चोरी–निकासीका ..
बीबीसी सहकारीमा नयाँ नेतृत्व
‘तपाईंंले ठूलो माछा किन नसमातेको ? तपाईंंलाई विद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ ०७१ साल कात्तिकको दोस्रो साता संसदको अर्थ समितिमा डाकिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले कड्किँदै सोधेका थिए । आयुक्त कार्कीले भनेका थिए, ‘म संसद्को सम्मान गर्दै यहाँ आएको हुँ । तपाईंहरू..
सशस्त्रमा भ्रष्टाचार प्रकरणः दुई ठेकेदारले अख्तियारमा के बयान दिए ?
शसस्त्र प्रहरीको रासन ढुवानीमा नक्कली बिल बनाएर करोडौं अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका शसस्त्र प्रहरीका आईजिपी कोषराज वन्तका सहयोगी मानिने दुई ठेकेदारसँग अख्तियारले बयान लिएको छ ।